Somaliland: Maxa Ku Cusub Xaalada Gobalka Togdheer Waxbarashadii Oo Hakad Gashay Xaaladi Caafimaad Oo Liidatah,,, - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maxa Ku Cusub Xaalada Gobalka Togdheer Waxbarashadii Oo Hakad Gashay Xaaladi...
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer soona gaadhaya xafiiska shabakada wararka Wargane ayaa waxay sheegayaan in maamulayaashii goobaha Waxbarasho ee la fasaxa la galiyey ay kasoo horjeesteen go’aankii ay maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ku amreen in fasax la galiyo dhamaan goobaha waxbarasho ee lagu barto Culuumta Diiniga ah iyo ta Maadiga ahba ilaa inta la xakamayno xanuunka Shuban Biyoodka ee ka dilaacay gobolka Togdheer gaar ahaana magaalada Burco.
Waxaana la sheegay in maamulayaasha dugsiyada Waxbarasho ee Burco badankoodu ay ardaydii la fasaxay amreen in maalinka Barri ah oo bishuna taha 5.May.2017 ay dib ugu soo noqdaa waxbarashadoodii,iyada oo wali magaalada Burco xaaladeedu fadhiyin oo wali uu ka jiro xanuunka Shuban Biyoodka isla markaana ay wali jiraan dad uu soo ridanayo xanuunku.
Waxaana maamulayaashu dugsiyadu gaar ahaana kuwa gaarka loo leeyahay ay ardaydii amreen sida la sheegay in maalinka barri ah ay dib ugu soo noqdaa waxbarashadoodii,taas oo ka hor imanaysa amarkii maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco.
Sidoo kalena wararku waxay intaa ku darayaan in ciidamo tiro badan oo Boolis ah lagu daadiyey magaalada Burco iyaga oo qabqabanaya goobaha waxbarasho ee furan,waxaana xoguhu noo iftiimiyeen in ciidamada Boolisku ay magaalada Burco gaar ahaana xaafadaha Qasabka iyo Aktoober ay kasoo qabqabteen rag haystay goobo waxbarasho oo malcaamado ah oo furnaa kuwaas oo dhamaantood xabsiga loo taxaabay.
Xaaladda magaalada Burco ayaa hadda ah mid xasiloon,waxaana dadaal xoogan loogu jiraa sidii loo xakamayn lahaa xanuunkan Shuban Biyoodka oo faro baas ku haya Bulshada gobolka Togdheer,waxaana hadda yaratay dhimashada dadka wallow ay wararka nasoo gaadhayaa sheegayaan in xalay magaalada Burco gaar ahaana mid kamid ah xarumaha Cilaajyada ee dadku lagu daweeyo uu ka dilaacay xanuunku isla markaana uu ilaa hadda Hal qof u dhintay.
Ilaa hadda lama garanayo talaabada ay maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ka qaadi doonaan maamulayaashan damacsan inay dib u furaan dugsiyada Waxbarasho ee fasaxa la galiyey.